Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Taxanaha 'Chucky' Teaser wuxuu Dhalmada u keenayaa Xididdada Asalka ah (Casaanka)
Warar Naxdin LehTaxanaha NaxdintaTrailer (filim)
Indhahaas buluugga ah - saxeexaas ayaa qoslaya; asalka ah Chucky wuxuu ku soo laabtay taxane cusub oo isla magaca SYFY ah iyo xiisaha xiisaha leh ee maanta hoos u dhacay!
Ciyaaryahankii caanka ahaa ee dilaaga ahaa ee toobiye madaxa ayaa mar kale dhibaato ku haya dadka, iyo adduunka naxdinta leh ee warka weyn laga siiyay dhammaan kartida ka dambeysa taxanaha; waxaad leedahay abuuraha asalka ah Don Mancini iyo kooxdiisii ​​uu doorbiday ee jilayaasha – qaarna shukaansi ilaa dib ugu noqoshada asalka. Tan waxaa ka mid ah Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Alex Vincent, Christine Elise, iyo dabcan codka ka dambeeya dhibaatada Brad Dourif.
Kuwa dhowaan yimid Lexa Doig (Jason X) iyo Devon Sawa (Meeshii ugu dambaysay) u soo koob ciyaartoy jiil cusub oo taageerayaal ah.
"Dabeecadda ugu weyn waa wiil 14 jir ah oo jinsi ah oo xoog sheeganaya oo lumay ka dib dhimashadii hooyadiis dhowaan," Mancini ayuu u sheegay EW. “Waa farshaxanyahan da’ yar oo sameeya farshaxanno ay ku qoran yihiin qaybo doll. Wuxuu ka helay Chucky iibka ardaaga wuuna iibsaday, laakiin waxaa soo baxday inuu helayo wax ka badan intii uu ku iibsaday. ”
Mancini wuu ku adkaaday shaqada abuurista taxanahan xitaa iyada oo loo marayo faafida. Waxay u muuqataa markan inuu soo dirayo asalka asalka ah ee rukhsadda isagoo siinaya Chucky koox yar. In kasta oo, si ka duwan asalkii uu Chucky ku ciyaaray lix sano jir, markan dhib badan Gen Z-er (Arthur) wuxuu ciyaaraa difaac.
Mancini wuxuu intaas ku daray: “Mid ka mid ah waxyaabihii aan doonayay inaan sameeyo waxay ahayd inaan dib u soo celiyo xayeysiinkeedii Play Ilmaha xididdada leh oo ay leeyihiin halyeeyada [carruurta]. Laakiin maadaama, labadii filim ee ugu horreeyay, waxaan mar hore ku sii talo-galnay inaan yeelano carruur yar-yar waxaan doonayay inaan baaro wax ka duwan, sidaa darteed markan waxaan sahaminaynaa dhallinyaro da 'yar. ”
Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, iyo Björgvin Arnarson sidoo kale xiddig.
Haddii aad u malaynayso in Chucky uu umuuqdo qof yaqaan, isha wanaagsan! Caaryada caruusadda ayaa si toos ah looga qaadayaa tan gudaha ku jirta Ciyaarta Ilmaha 2. Tixdan cusub waxay ka soo muuqan doontaa kanaalka SYFY laga bilaabo Oktoobar 12, 2021, waxayna ka koobnaan doontaa 8 qaybood.
Mancini ayaa sheegay in hadii bandhiggu guuleysto ay jiri doonaan xilliyo badan oo soo socda.
U fiirso jaantuska hoose oo sii wad iHorror si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taxanahan naxdinta leh ee cusub.
Sawirka madaxa waxaa laga soo qaatay EW.com.
'Wadada Cabsida Qaybta 3: 1666' waxay keeneysaa sedex geesoodka oo ruxmaya, kuna qanacsan